Nyika dzisiri-EU dzinobatana nesarudzo yeEU yekurambidza ndege dzeBelarusian kubva kunhandare yavo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Nyika dzisiri-EU dzinobatana nesarudzo yeEU yekurambidza ndege dzeBelarusian kubva kunhandare yavo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia neAlbania, Iceland, Liechtenstein neNorway vanovhara matenga avo kumabhazi eBelarusian.
Nyika nomwe dzisiri dzeEU dzinobatana neEU pakurambidza vatakuri vemhepo veBelarusian.
EU Council padanho remakurukota ekune dzimwe nyika yakabvumidza chikamu chechina chezvirango zvakanangana nevanhu 86 veBelarusian nemasangano epamutemo.
Ndege yaMay 23 Ryanair kubiwa nendege neBelarus yakatumira kushamisika kunoenderera kuburikidza neindasitiri yekufambisa nendege.
Vezvenhau veEuropean Union Council vakaburitsa chirevo neMuvhuro, vachizivisa kuti nyika nomwe dzisiri dzeEU dzakatsigira danho renhengo dzeEU rekuvhara nzvimbo yavo yevatakuri vemhepo veBelarus
"Sarudzo yeKanzuru yakasarudza kusimbisa matanho aripo ekudzvinyirira tichitarisa mamiriro ezvinhu muBelarus nekuunza kurambidzwa kwekuwandisa kwenzvimbo yemuchadenga yeEU uye nekuwana nhandare dzeEU nevatakuri veBelarus marudzi ese," chirevo chinodaro.
"Nyika Dzinokwikwidza Nyika yeRepublic of North Macedonia, Montenegro, Serbia neAlbania, uye nyika dzeEFTA, Iceland, Liechtenstein neNorway, nhengo dzeEuropean Economic Area, dzinozvibatanidza neChisarudzo cheKanzuru ichi," vevatori venhau vakadaro.
"Vachave nechokwadi chekuti mitemo yavo yenyika inoenderana neChisarudzo cheKanzuru ichi," basa rekudhinda rakawedzera. "European Union inocherekedza kuzvipira uku uye nekukutambira," yakadaro.
Pakutanga neMuvhuro, iyo EU Council padanho revatariri vekunze yakabvumidza chikamu chechina chezvirango zvakanangana nevanhu makumi masere nevatanhatu veBelarus uye masangano epamutemo ndokusvikira chibvumirano chekutemera zvirango zvehupfumi kumatunhu manomwe eBelarus, anosanganisira potash uye petrochemicals kutengesa kunze uye chikamu chemari. . Zvirango zvehupfumi zvinoenderana nekutenderwa kwekupedzisira kuEU Summit muna Chikumi 86-24 uye zvichazoshanda mushure meizvozvo
Chivabvu 23 Ryanair kubiwa kwendege neBelarus kwakatumira kushamisika kunoenderera kuburikidza neindasitiri yekufambisa nendege. Ndege, iri munzira kubva kuGirisi kuenda kuLithuania, yakabiwa nekumanikidzwa kumhara muMinsk nekuda kwekutyisidzira kwebhomba.
Pangosvika kumanikidzwa kumhara kunhandare yeMinsk, vamiriri vekuBelarusian vakakwira ndege ndokusunga anopikisa blogger Roman Protasevich aidiwa nehutongi hwaLukashenko nemusikana wake, mugari weRussia Sofia Sapega.